Dr.Taani Oo Kamid Ahaa Hal-gamayaashii UFO,Oo Toronto Kaga Dhawaqey Tageerada Musharax Jamaal Cali Xuseen | Berberatoday.com
Dr.Taani Oo Kamid Ahaa Hal-gamayaashii UFO,Oo Toronto Kaga Dhawaqey Tageerada Musharax Jamaal Cali Xuseen
Toronto(Berberatoday.com)-Dr. Taani ayaa xafladdii Xisbiga UCID ee magaaladda Toronto ee dalka Kanada kaga dhawaaqay inuu saddexda murashax ee garoonka ku jira uu ka taageersan yahay mudane Jamaal Cali Xuseen. Dr Taani ayaa sheegay in uu ixtiraam u hayo labadda murashax ee kale ee Muuse
Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciro.
Dr Taani oo ka mid ahaa ururkii UFO iyo raggii la xidhxidhay 1982kii ee uu halganku ka bilaabmay, ahaana aqoonyahanka qudha ee ka soo jeedda gobolka Awdal ee ka mid ahaa aqoonyahanadaasi la xidhxidhay 1982kii ayaa badheedh ah uga hadlay xaaladda dalka ka jirta maanta.
Dr Taani wuxuu sheegay in maanta dhalinyaraddii Somaliland ay fursday weyn haystaan, oo welibana ku adkaan doonto in dalka isbedel loo helo hadaanay maanta ka faa’iidaysan oo aanay dooran mudane Jamaal Cali Xuseen. Mudane wuxuu si qoto dheer qudbaddii uu meeshaasi ka jeediyey ku sheegay inuu taageersan yahay oo uu isagu taageeray (endorsement) in ay dadku u codeeyaan mudane Jamaal Cali Xuseen oo ah nin nadiifa oo aqoonteedda iyo waaya aragnimadeedda leh.
Maanta caalamkii wuu is badeley ragga la hana qaadi karaaya ayaa loo baahan yahay. Wuxuu jeedgay in waddanka dhan ee Canada uu doortay nin dhalinyaro ah oo uu Jamaal Cali Xuseen ka weyn yahay 7 sanadood.
Wuxuu kaloo Dr. Taani aad uga hadlay musuqmaasuqa dalka hadheeyey iyo indho sarcaadka ay ummaddii maalin walba arkayso. Maanta nin qayb ka ah halka uu dalku marayo uma baahinin ee nin wax cusub oo ka duwan waxan imika ayaa uu dalku u baahan yahay ayuu qudbadiisa ku gunaanaday.
dhinaca kale Dr. Taani waxa uu si kulul u weeraray xisbigga talladda haya ee Kulmiye kuna tilmaamay xukuumad tahriibaysa markaad eeg to boobka hantida umada iyo sida loo xaalufiyay halka uu dalkii marinaayo haatan.